သမ္မတသစ်အနေဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့် မှု၊ ပြည်သူလူထုလုံခြုံမှုနှင့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းမ?? - Yangon Media Group
သမ္မတသစ်အနေဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့် မှု၊ ပြည်သူလူထုလုံခြုံမှုနှင့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းမ??
သမ္မတသစ်အနေဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု၊ ပြည်သူလူထု၏လုံခြုံမှုနှင့် စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုကို ဦးစားပေးဖြေ ရှင်းသင့်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ပြောကြားလိုက်သည်။ မတ် ၂၈ ရက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲကျင်းပခဲ့ရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဝင်းမြင့် ရွေးချယ်ခံရခြင်းနှင့်ပတ် သက်၍ ဒီမိုကရေစီတူဒေး၏ မေးမြန်းမှုကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးလှသိန်း က အထက်ပါအတိုင်း တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
”နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကုန်ဈေး နှုန်းကြီးမြင့်မှု၊ လုံခြုံမှုနဲ့ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုတွေကို ဦးစားပေးဖြေ ရှင်းသင့်တယ်။ ဒါတွေအားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် အန်ကယ် တို့နိုင်ငံအဆင်ပြေသွားမှာပါ”ဟု ဦးလှသိန်းက ပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် လွှတ်တော်တွင် အင်အားများသူဘက် ကသာ အနိုင်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းအပေါ်ဘာမှမပြောလို ကြောင်း ¤င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ယင်းအပြင် ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်အားလုံး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများဖော်ဆောင် ပေးသင့်ကြောင်း ၎င်းက အ ကြံပြုသည်။ အခွန်အခများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပြန်လည်သုံးသပ်သင့် ကြောင်းနှင့် ပြည်သူ့ဘဝလက်ရှိအခြေအနေကိုမြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ¤င်းက သုံးသပ်သည်။ ”နိုင်ငံတစ်ခုဟာ အခွန်အခနဲ့ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုလက် ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီအခွန်အခကြောင့် ဝန်ပိပြီးတော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘဲ ရပ်တန့် သွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဦးဝင်းမြင့်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍကို အဓိကထား ကိုင်တွယ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က မတ် ၂၇ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ ပြောကြားထားသည်။ ယင်းအပြင် ဦးဝင်းမြင့်သည် ဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်သည့်အလျောက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်း လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဟုယုံကြည် ပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍလုပ်ဆောင်မှုနှင့်တစ်ပြိုင်တည်း အခြားကဏ္ဍများကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ဦးဝင်းမြင့်အနေဖြင့် ရုပ်သေးသမ္မတဖြစ်လာမည်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏တာဝန်များကို ခွဲဝေထမ်းဆောင်မည့် အတွဲညီညီလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် သမ္မတဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး မုံရွာအောင်ရှင်က ဒီဗွီဘီဒီဘိတ်အစီအစဉ်တွင် ပြောကြားထားသည်။ မတ် ၂၈ ရက်ကကျင်းပသည့် သမ္မတရွေးချယ်ပွဲတွင် ဦးဝင်းမြင့် က ၄ဝ၃ မဲ၊ ဦးမြင့်ဆွေက ၂၁၁ မဲ၊ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ၁၈ မဲ၊ ပယ်မဲလေးမဲတို့ဖြင့် ဦးဝင်းမြင့်က မဲအသာဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ကွင်းဆက် လူသတ်သမားကို ဖမ်းဆီးကြမည့် စုံထောက်နှစ်ဦး The Chase ရုပ်ရှင်